Wararka Maanta: Isniin, Apr 29, 2013-Puntland oo la sheegay inaysan ka qaybgalayn shirka bisha soo socota lagu qabanayo Magaalada London ee dalka Britain
Kulankii ay galabta labada dhinac Garowe ku yeesheen, oo intii uu socdey ahaa mid ay dood kululi haraysay, waxaa qodobada lagu kala boodey kamid ah: ajendaha lala tegayo shirka London iyo maamul u sameynta gobollada Jubbooyinka iyo Gedo.
Arimaha maamul u sameynta gobollada Jubbooyinka oo mowqifka ay dowladda Federaalku ka taagan tahay uu ahaa mid cad, waxay Puntland ku adkaysatay in ay waajib tahay in dowladda Federaalku ay taageerto.
Dhinaca ajendaha shirka London waxay Puntland soo jeedisey in wax lagu daro, halka ay dowladda Federaalku ku adkeysatay in ajendaha shirku uu yahay mid cad, islamarkaana horay loo go’aamiyey.
Qodobka saddexaad ee isna doodda sii xoogeeyey ayaa ahaa, wax-ka-bedel ay Puntland sheegtay in lagu sameeyey Dastuurka, , inkasta oo dhinaca Federaalku ay eeddaas iska fogeeyeen.
Warka ku saabsan in Puntland aysan ka qayb geli doonin shirka London ayaa ah mid hordhac ah, mana jiraan ilaa iyo hadda mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland oo si rasmi ah u shaaciyey.
4/29/2013 6:56 AM EST